Idozi Your iPhone Idi nso ihe mmetụta site Onwe Gị
Gịnị bụ iPhone Idi nso ihe mmetụta?
Otu IPhone bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na sturdy mobile ngwaọrụ na ahịa taa. Na eso ụzọ nke IPhone Mara dị ka Apple, na-ewe oge iji mee ka ike, ogologo-adịgide adịgide ngwaọrụ. Otú o sina dị na ihe ọ bụla na nkà na ụzụ gadget dị taa e nwere na o kwere omume nsogbu ndị na-ga-ewetara onwe ya na a n'oge ruo n'oge ndabere. Ke ibuotikọ emi anyị ga-ele anya na IPhone Idi nso ihe mmetụta. Mbụ ihe IPhone Idi nso ihe mmetụta bụ ụdị mmetụta na ihu ọma na-achọpụta rụọ mgbe a onye ọrụ nwere ngwaọrụ nso ha ihu, mgbe oku na-maka ihe atụ. Ihe Idi nso ihe mmetụta na-eme bụ ịgwa ndị IPhone na ọ bụ nso ihu gị ka ọ ga gbanyụọ metụrụ zere achọghị ntinye na ọkụ na ihuenyo, ịzọpụta batrị. The Idi nso ihe mmetụta bụ nnọọ adaba ụdị atụmatụ na e wuru n'ime bụla IPhone.
Olee nsogbu ga-eme ka ihe iPhone si Idi nso ihe mmetụta gbajiri?
Apple ngwaọrụ bụ ndị dị ike na ike na-a ukwuu nke itulielu na-atụgharị ma mgbe akụkụ ụfọdụ nke IPhone amalite malfunction dị ka Idi nso ihe mmetụta, ọ pụrụ ịbụ a obi mgbawa. Mgbe onye iPhones 'Idi nso ihe mmetụta na-agbajikwa, e nwere dị iche iche okwu na-emegiderịta ga-eme ka a n'ihi nke a.
Na-agbanwe agbanwe na ihuenyo gị IPhone - Nke a bụ nnọọ nkịtị nke na IPhone ọrụ. Ozugbo ákwà ngebichi nke ngwaọrụ a gbanwere, ọ nēche inwe nsogbu ụfọdụ maka idi nso mmetụta, dị ka ọ na-adịghị arụ ọrụ n'ụzọ ọ kwesịrị. Mgbe nke a mere ị kwesịrị ị na-eme omume dị ka na-apụ na ihuenyo ọzọ na n'ịhụ na-etinye kwesịrị ekwesị na ihe mmetụta bụ kpuchie. Mkpa ka ị na-reposition n'ihu igwefoto na Idi nso ihe mmetụta ka e meere a ukwuu ohere na o nwere ike na-arụ ọrụ ọzọ.
A nnukwu hit na ike n'elu - An àgwà nke kasị color bụ na-siri ike iji na-imeri tụlee, tosses na scratches, ma n'agbanyeghị nke ozodimgba iko echiche na mmiri na-eguzogide ụdị teknụzụ emejuputa atumatu IPhone ngwaọrụ, e nwere ike ndị ọzọ-apụghị izere ezere na-emebi dị otú ahụ dị ka a ike dobe on a siri ike n'elu. Mgbe ị na-IPhone dara nnọọ ike, ọ pụrụ na-adịgide adịgide-agbaji Idi nso ihe mmetụta na IPhone na-eme ka ọ ghara arụ ọrụ.
Emeputa nsogbu - Apple bụ otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ dị na mobile ụlọ ọrụ ma na apụtaghị na ha nwere ike ịbụ na-ata ụta na ụfọdụ ebe. Technology ga agbasaghị ada mgbe ụfọdụ na mgbe ị na-azụ otu IPhone i nwere ike na-aghọta na mbọhọ mmetụta anaghị arụ ọrụ ọ bụla mgbe nile. Nke a bụ nanị a emeputa nsogbu n'ihi na i nwere ike dị nnọọ zụrụ ekwentị ụbọchị ole na ole tupu nsogbu mere.
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na ị chọrọ idozi gị IPhone site onwe gị, depụta nzọụkwụ na foto ma ọ bụ video
Nwere a gbajiri IPhone? Chọrọ ka ọ ofu otú i nwere ike na-aga azụ ihe ọma ochie ụbọchị mgbe ekwentị gị na-arụ ọrụ? Ọfọn e nwere ọtụtụ ụzọ na ihe ndị ị pụrụ ewe iji naghachi gị trendy IPhone azụ a na-arụ ọrụ ala. Nzọụkwụ depụtara n'okpuru bụ inyere gị aka ma ọ bụrụ na ị chọrọ idozi gị IPhone onwe gị kama na-ewere ya ka a teknishian ma ọ bụ gbaara dealer. All azum eji ga-ọma rụrụ.
Nzọụkwụ 1: Reboot ekwentị - Mgbe ụfọdụ, ndị nnukwu mbipụta naanị achọ a dị mfe fix mgbe anyị nwere ike iche na ọ bụ n'ezie 'rọketi sayensị'. Ọ bụrụ na ị na-aghọta gị Idi nso ihe mmetụta na-adịghị arụ ọrụ ọ bụla mgbe nile, i kwesịrị ịrụ a reboot ugboro abụọ. Nke a ga-mere karịsịa ikpe ebe gị Idi nso ihe mmetụta na-arụ ọrụ na-abụghị gị idebe ma ọ bụ wụnye ọ bụla kedi software na gị IPhone. Ọ bụrụ na nke a adịghị arụ ọrụ, mgbe unu meworo ya banyere ugboro abụọ, mgbe ahụ, i nwere ike gaba kwụpụ abụọ.
Nzọụkwụ 2: Mmezi ma ọ bụ ịgbanwe mbọhọ jide - The Idi nso ihe mmetụta na ihe IPhone nwere akụkụ dị iche iche dị ka mbọhọ jide maka ihe atụ. Mbọhọ jide ga-ekwesị kwekọọ-nri ebe maka mmetụta na-arụ ọrụ. The jide kwesịkwara mgbanwe ma ọ bụrụ na ọ na-emebi ma ọ bụ dochie ma ọ bụrụ na achọ, n'ihi na mgbe ụfọdụ anyị na dissemble iPhone na mbọhọ jide dara pụta na-enweghị anyị maara. Ozugbo IPhone idi nso jide na-dochie ma ọ bụ kwekọọ n'ụzọ ziri ezi ọ ga idozi nke. I nwekwara ike ịgbakwunye a obere warara nke teepu na mmetụta iji hụ na bụ adịghị ada si. Nke a nzọụkwụ achọ ụfọdụ ịta na ihe ọmụma banyere akụkụ dị iche iche nke IPhone mere na ị na-eme ọ dịghị mmebi ihe ọ bụla ma ọ bụ idejo ihe wires wdg
Nzọụkwụ 3: Iji eletriki teepu maka Aftermarket meziri - Ọ bụrụ na ị na-adịbeghị anya ịgbanwe gị IPhone ihuenyo i nwere ike na-aghọta na nke a bụ ihe na-eme ka ihe mmetụta bụghị ikpu ọrụ. Gịnị ka ị pụrụ pụrụ ime ugbu a bụ ezie na bụ ọkọkpọhi ụfọdụ eletriki teepu na dissemble ekwentị otú i nwere ike na-etinye na-ọma n'elu ihuenyo na mmetụta iko. Ị ga-ahụ mkpa iji a mma ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nkọ ihe Punch abụọ obere onu n'ime teepu nke mere na sensọ ike ịmata ọkụ nke ga-ekwe ka ha na-arụ ọrụ. The Aftermarket meziri na-ekwe ukwuu ìhè ịbanye Idi nso ihe mmetụta na nke a bụ ihe mere i ji na-ahụ na gị sensọ anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ozugbo ị-eme nke a fix ị kwesịrị ị na-enwe ike iji nweta ya na-arụ ọrụ onwe gị.
N'etiti ndị niile IPhone nsogbu, na mbipụta na Idi nso ihe mmetụta bụ ụfọdụ n'ime ihe kasị akpaghasị n'anya. Ọ pụrụ ịbụ nnọọ manụ mgbe gị IPhone Idi nso ihe mmetụta malfunctions.
5 ụzọ banyere otú nyefee kọntaktị site na iPhone na kọmputa
Top 5 Kasị-jụrụ ajụjụ banyere iPhone mmekọrịta
Top 10 égwu na-eme ka ndị kasị mma Photo collage on iPhone
Mgbe Ike Tọgharia iPhone tupu Ịgụ Ultimate Checklist
> Resource> iPhone> Idozi Your iPhone Idi nso ihe mmetụta site Onwe Gị